Human Library (Tourism and Hospitality)
25/08/2018 Offline Event
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အလားအလာနဲ့ အခွင့် အလမ်းတွေ အကြောင်းကို လက်ရှိ လုပ်ငန်းခွင် ကဏ္ဍမှာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင် နေသူတွေနဲ့ ရင်းရင်း နှီးနှီး မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်မဲ့ 'ဝိုင်း'ရဲ့ 'သက်ရှိ စာအုပ်များ - Human Library’ အစီအစဉ်။
Human Library ဆိုတာ လူငယ်တွေအတွက် လုပ်ငန်း နယ်ပယ် အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ (Books - စာအုပ်များ) နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့် ရှိမည့် နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ အကြောင်းအရာတွေကို စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီး ကြေကြေညက်ညက် သိသွားသလို အခုဒီ Human Library ကနေ သက်ရှိစာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် လမ်းညွန်မှုနဲ့ သိကောင်းစရာတွေ၊ အကြံပြုမှုတွေ ရရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီး အတွက် Human Library အစီအစဉ်တွေကို ထပ်မံ ပြုလုပ်ပေးသွားဦးမှာပါ။
နေ့ရက် - ၂၅.၈.၂၀၁၈ (စနေ နေ့)
အချိန် - နံနက် ၉နာရီ ခွဲ မှ ၁၁နာရီ
ပွဲနေရာ - Myanmar Metropolitan College
No. 232, 7th Floor, Bargayar Street, Myay Ni Gone, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမဲ့ Speaker တွေကို မကြာခင် ထပ်မံကြေညာပေးသွားပါမယ်။
သမရိုးကျ ဟောပြောပွဲ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပဲ speaker တွေနဲ့ တက်ရောက်သူတွေ တိုက်ရိုက် မေးမြန်း ဆွေးနွေးရမဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက် ထားရှိတာမို့ Registration Link (http://bit.ly/HumanLibrary_TourismAndHospitality) ကနေ တက်ရောက်ဖို့ အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Shout out to Myanmar Metropolitan College for sponsoring the venue!
Dr Su Myat Sandi Oo - Executive director at Mira Travels & Enterprises Ltd. & Director at Trust Management Institute
Than Zaw @ Ken - Head of Marketing at Oway Travel
Thiri Zeya - Director of Leasing at Shangri-La Hotels & Resorts Myanmar
Wynee’s Human Library on Tourism and Hospitality is where you can engage in an in-person discussion with leading professionals in the industry for ideas and guidance on the sector, job scope and career opportunities!
Human Library isaspace where youth can interact with the market leaders and professionals from different sectors (books) close up and personal. Like you learn your know-how through readingabook, Wynee aims to provide an environment where you can seek advice and expert opinion on your career pathway and job-related questions. More Human Library series will be organised regularly for different industry sectors.
Date - 25.8.2018 (Saturday)
Time - 9.30 am to 11 am
Venue - Myanmar Metropolitan College
Details of the participating speakers will be announced soon.
Since the event theme is in small-group discussions with the speakers, seats are limited. We encourage you to register your attendance through our registration link (http://bit.ly/HumanLibrary_TourismAndHospitality) as soon as possible to secure your seat.